Muuri News Network » Sawiro fadeexd ah: R/Wasaare Sharmaarke oo lagu bahdilaayo Jommo Kenyatta oo la soo bandhgay
Sawiro fadeexd ah: R/Wasaare Sharmaarke oo lagu bahdilaayo Jommo Kenyatta oo la soo bandhgay
Xog dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa Bahdilkii R/wasaare Cumar C/rashiid iyo Wafdigiisa loogu geystay Garoonka diyaaradaha ee Jommo Kenyatta ee magaalada Nairobi.
Warar hoose ayaa tibaaxaaya in Laamaha amaanka Dowlada Kenya ee Jommo Kenyatta, ay aad uga shakiyeen Safarka R/wasaaraha, waxaana gabi ahaantooda laga qaaday Boorsooyinkii ay wateen kuwaasi oo lagu dhex tuuray qol yar oo lagu xanaaneeyo Eeyaha baara Boorsooyinka si looga hortago haddii ay jiraan waxyaabo lid ku ah amaanka garoonka.
Mid kamid ah Saraakiisha Garoonka ayaa R/wasaaraha ku wargaliyay in Boorsooyinka ay ka baarayaan waxyaabaha maanka dooriya ama wax waliba oo lid ku ah amaanka, waxa uuna sheegay in amarkaasi uu siiyay Taliyaha Ciidamada Garoonka.
Cumar C/rashiid oo isku dayay dhacdadaasi kadib inuu xiriir la sameeyo Madaxweynaha Kenya, ayaan helin wax jawaab ah, waxaana xusid mudan in mid kamid ah Xildhibaanada la soctay R/wasaaraha uu xaqiijiyay in Sharmaarke uu maciin biday inuu u jilicsanaado amarka askarta.
Wefdiga ayey la soo deristey nasiib xumo maadaama aysan helin diyaarad toos uga qaada Muqdisho oo geysa Istanbul sida wixii ka horeeyey weerarkii diyaaradda Daallo Airlines, waxaana ay ku khasabanaadeen sida ay sameyn jireen waayadii hore in ay dhaxniin (Transit) ku noqdaan dal kale.